Ku soo dhowow ZIBO YUNFENG CERAMICS CO., LTD
Taageerada Email zbyunfeng@yunfeng.cn
Taageerada Wicitaanka +86 0533 5556936
Nadiifiyaha warqadda dhexe
Nadiifiyaha Joogtada ah ee Hooseeya
Nadiifiyaha Cufnaanta Dhexe
Alumina saxan dhoobada-mosaic-leben-leben ah
Qaybaha fuuqbaxa- sanduuqa nuugista
Alumina biibiile dhoobada-giraanta-tuubada-laaban-xusulka
Xidho Alumina Alumina Ceramic
Alumina dhoobada si loo habeeyo
Alaabooyinka dhoobada Alumina waxay leeyihiin awood suuq oo weyn
Warshadaha kiimikada ee casriga ah, birta iyo warshadaha kale, badiyaa waxay isticmaalaan mashiinno iyo qalab kala duwan.Aaladahaani waxay ka ciyaaraan door aad u muhiim ah, xooggana lama barbar dhigi karo Sida aan wada ognahay, agabyo badan oo wax soo saarka warshaduhu waa daxalaysteen. Haddii mashiinku ka samaysan yahay bir saafi ah, ...
Horudhaca iyo adeegsiga dhejiska ka-hortagga dhejiska dhoobada
Xabagta dhoobada-iska-caabbinta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dhejis-iska-caabbinta dhejiska dhoobada, dhejiska ka-hortagga koollada dhoobada dhoobada. Waxay tilmaamaysaa nooc ka mid ah dhejis wax-qabad sare leh oo si gaar ah loogu isticmaalo in lagu dhejiyo xaashida dhoobada u adkaysta ama looxyada dahaarka dusha sare ee qalabka salka qalabka ee duugga ...
Shaqooyin badan, noocyo badan, dhoobada alumina faa'iidada badan leh
Dhoobada aluminiumka iyadoo la raacayo waxa ku jira Al2O3 waxay u qaybsan tahay 99 galaas, 95 galaas, 92 porcelain iyo noocyo kale, mararka qaarkood waxyaabaha Al2O3 ee ku jira 80% ama 75% ayaa sidoo kale loo kala saaraa taxanaha dhoobada alumina caadiga ah. Waxaa iyaga ka mid ah, 99 alaab oo alumina porcelain ah oo loogu talagalay soosaarka heerkulka sare ...
Dayactirka joogtada ah ee nadiifiyaha waraaqaha/Buugga nadiifiyaha
Tilmaamaha iyo Qoraalada Isticmaalka: 1. Kahor intaadan bilaabin mishiinka, hubi in dhuumaha dhumucdoodu ay hagaagsan yihiin iyo in tuubada laamiga ee nadiifiyaha dhoobada ay furan tahay. 2. Fur waalka dheecaanka slag si dheecaanka dheecaanku u noqdo mid siman. 3. Fur aaladda qalalan si aad ...
Farsamaynta dhoobada ayaa ah afar nooc oo habab ah
Waxaa jira afar hababka dhoobada dhoobada ee caadiga ah: shiidi, qallajin, farsamaynta ultrasonic iyo farsamaynta laser. Dhoobada Yunfeng ee soo socota ee adiga kugu habboon inaad soo bandhigto, hababka kala duwan ee ka shaqaynta dhoobada waa sida loo farsameeyo. Marka hore, shiidi: waa nooc ka mid ah geeddi -socodka lagu gaaro khafiifinta degdegga ah, u ...
Waa maxay astaamaha tuubada dhoobada alumina?
Tuubada dhoobada aluminiumka waa nooc ka mid ah alumina (Al2O3) oo ah maaddada dhoobada ugu weyn, waxaa loo adeegsan karaa aerospace, qalab milatari. Waa dhoobada si ballaaran loo isticmaalo, hadda qof walba wuxuu si faahfaahsan u soo bandhigayaa faa'iidooyinka tuubada dhoobada alumina. 1. Degganaanshaha wanaagsan ee dhoobada dhoobada alumina: Alumina tube dhoobada s ...
Tiknoolajiyadda wax -ka -beddelka ugu badan ee loo isticmaalo dhoobada alumina
Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo dhoobada alumina, sida soo saarista, duritaanka, cadaadinta qalalan, cadaadinta kulul iyo hababka kale ee sameynta. Sanadihii la soo dhaafay, farsamooyin badan oo sameynta cusub ayaa la soo saaray gudaha iyo dibaddaba. Qaabab sameynta kala duwan ayaa loo horumarin karaa iyadoo loo eegayo qaabab kala duwan iyo ...
Xusuus -qorka rakibidda waalka iridda mindi ee hawo -mareenka ee ka -saarista diirinta sare
Tilmaamaha rakibidda ee waalka: 1.Waalka waa in lagu rakibaa si waafaqsan jihada fallaarta ku jirta waalka, si loo go'aamiyo jihada rakibidda waalka, waalka laguma dhejin karo jihada ka soo horjeedda, madaxa siligga waalka waa inuu ahaadaa toos ah, wajigeeda dhammaadkiisa iyo ...
Arrimaha rakibidda nadiifiyaha ee u baahan fiiro/sida loo rakibo nadiifiye diirran?
Digniino ku saabsan rakibidda qashin -qubka Ka -taxaddarrada rakibidda: 1. Ka hor rakibidda, fadlan si taxaddar leh u hubi in cabbirka aasaasiga ah uu waafaqsan yahay sawirka, oo hubi in liiska xirxiriddu ay la socoto alaabta. 2. Ku soo ururi qaansada iyo taangiga dheecaanka dheecaanka ee str ...
Dayactirka ka -saarista caagadaha
Dayactirka ka -saareyaasha qashin -qubka 1. Si joogto ah u hubi in waalka kubbadda soo -gala iyo ka -bixiddu ay dabacsan yihiin. 2. Si joogto ah u hubi in la xidho duleelka dheecaanka dheecaanka ah ee laan kasta oo kala -soocid ah. Haddii uu xiran yahay, waa in lagu beddelaa waqtiga. 3. Si joogto ah u hubi qiimaha cabbiraha cadaadiska si ...
Qalabka wax lagu nadiifiyo ee xaashida ah mabaadi'da qalabaynta
Shimbiraha vortex -ka waxaa la alifay 1891 -kii, laakiin markii ugu horraysay waxaa loo adeegsaday warshadaha waraaqaha 1906. Wakhtigaas, vortex slagger -ka waxaa loo adeegsaday oo kaliya in laga saaro wasakhda culus ee ka timaadda dheef -shiidka. Jirka ugu weyn ee ka -saaraha dabargoynta waa dhululubo ...
2019 Qaahira, Masar (mashiinka samaynta waraaqaha)
Iyada oo qorraxdu kulushahay iyo isku -darka Carbeed ee dahsoon. Waxaan raacnay kooxda bandhigga xaashiyaha Bossing ee Qaahira ee quruxda badan. Gelitaanka Masar waa iid indhaha, safar maanso ah. Waxaa jira Ahraamyo dahsoon, Fircoonkii hore ...
Zichuan galbeed ee Liu watts Park Warshadaha, No.1. Zibo, Shandong, Shiinaha
Alaabooyinka dhoobada Alumina waxay leeyihiin sumad weyn ...
Hordhac iyo adeegsiga duug-resi ...